* I-Cottage enemibono emihle. Kufuphi nonxweme*
Wamkelekile kwindlwana yethu epholileyo enembono entle kumda weHamlet entle yePen y Fai. Igumbi elinye elineplani elivulekileyo elinendlu yangasese yeen-suite / igumbi lokuhlambela. Ikhitshi elixhotyiswe ngokupheleleyo ngomatshini wokuhlamba, i-microwave, i-cooker yombane. Imizuzu eyi-15 ukuya kwiilwandle ezintle. Ilizwe pub yimizuzu emi-3 yokuhamba ngokutya okukhulu kunye nee-ales zasekhaya. Imizuzu eli-10 ukuhamba ukusuka kwiLali yoMyili weMcArthur Glen. Ukuphuma nje kwe-M4 ilungele uhambo oluya eCardiff naseSwansea. Ilungele iibhayisekile zeentaba/iibhayisikile.
Wamkelekile ePen y Cae Cottage, enye kumqolo wezindlu ezintathu ezibekwe kumda wedolophu entle yasePen y Fai kwaye kufutshane nedolophu yaseBridgend kunye nembonakalo entle yaselunxwemeni. Le propathi inqabileyo ifanelekile ukuba izibini kunye neentsapho ezincinci zonwabe ngokuhamba nje okufutshane ukusuka kwi-pub yelali ukutya okumnandi kunye nee-ales zasekhaya. Le ndlu intle ibonelela ngesicwangciso esivulekileyo sokulala kumgangatho wokuqala kunye ne-en suite. Kumgangatho ophantsi kukho isicwangciso esivulekileyo sokuhlala / ikhitshi kunye neengcango zepatio ezikhokelela kwigadi evaliweyo yeyadi. Kutheni ungayonwabeli iglasi yewayini okanye i-allfresco yokutyela ngorhatya oluhle lwasehlotyeni.
Sijikelezwe ngamaphandle amangalisayo, alungele ukuhamba.
Yiza uhlale nathi ngeKrisimesi uyokuthenga eMcArthurGlen okanye uthathe uhambo oluya kwikomkhulu ukuze uxhase iqela lakho kwibala lemidlalo lePrincipality kwiAutumn internationals.
Ipropathi ethandekayo yokulala eyi-1 kumqolo wezindlu ezi-3, kwindawo esemaphandleni enembono entle. I-pub yelizwe (inja enobubele) ukuhamba ngemizuzu emi-2. Ijikelezwe ngumhlaba oqhelekileyo ulungele izinja. Umlambo uhamba 10 imizuzu kude. Biyela umkhondo kwimizuzu emi-5 ngebhayisekile. Kwakhona, i-Afan Valley Mountain trail malunga neekhilomitha ezili-9 kude edume kakhulu. Imizuzu eli-15 ukusuka elunxwemeni kunye nolwandle oluhle ngokwenene.
Iihambo ezintle naliphi na ixesha lonyaka nokuba kusehlotyeni kwiihambo eziqhelekileyo okanye ezipholileyo zasekwindla.
Indawo yomyili kaMcArthur Glen yimizuzu eli-10 yokuhamba. Ilungele uhambo lweKrisimesi lokuthenga. (Iivenkile kunye neendawo zokutyela ziquka iM & S, iStarbucks, iWagamama, iTed Baker, iH & M, iSuperdry, iMcDonalds.
I-Odeon Cinema malunga nemizuzu eyi-10 yokuhamba.
Indawo egqwesileyo kunye nexabiso elikhulu.
Cardiff 32 imizuzu - 20.8 miles
Swansea 34 imizuzu - 21.9 miles
Porthcawl 13 imizuzu - 8.9 miles
Ogmore Ngolwandle imizuzu engama-20 - 7.3 miles
Iyafumaneka ngemibuzo njl.njl kwaye uhlala ecaleni kwepropathi. Ungaqhagamshelana nangaliphi na ixesha ngefowuni.